Dainik Headlines - Page 10 of 490 - Nepali Khabar from Nepal
आज विद्याकी देवी सरस्वतीको पुजा , यस्ताे छ पूजनविधि #दर्सन सोरुप लाईक गर्नु होस ।
February 10, 2019	Dharma 0
आज सरस्वती पूजा , यस्ताे छ पूजनविधि काठमाडौँ / प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने श्रीपञ्चमी विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइँने गरिन्छ । वसन्त पञ्चमीका दिन सरस्वतीको पूजा गरे विद्या बुद्धि बढ्ने विश्वास रहेको छ । देशभरका सरस्वती मन्दिरमा पूजा आराधना गर्न श्रद्धालुको भीड लाग्छ …
आज आईतवार पाथिभरा मातालाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – दुःखसुख, आयव्यय, सफलता–असफलता उस्तैउस्तै होला । शुभफल पाउन संघर्ष नै गर्नुपर्छ । साँझपख रमाइलोपन र विलासितातर्फ मन आकर्षित हुनेछ । मन त्यसैत्यसै उत्ताउलो र चञ्चल बन्नसक्छ । शरीरमा उत्साह देखिन सक्छ । यात्राबाट पर्याप्त लाभ हुन सक्दैन । नयाँ …
February 9, 2019	Dharma 0
बाइबल क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ, कोरान मुस्लिम धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ हो । त्यसैगरी, हिन्दु धर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक ग्रन्थ वेद हो। वेद चार वटा छन् ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अर्थर्ववेद । यी चार वेदको निष्कर्ष उपनिषद् ग्रन्थ हो। उपनिषद्बाटै १८ पुराण बनेका हुन्। सबै वेद, उपनिषद् …
एजेन्सी । पति पत्नीबीच बेलाबेलामा झगडा पनि हुन्छ भने प्रेमपनि हुने गर्दछ। शिष्टाचार र व्यवहारले सम्बन्धमा निकै गहिरो प्रभाव पार्दछ। कयौँ समय पति पत्नीबीच सानो सानो कुरामा झगडा तथा मन मुटाव यति धेरै बढ्छ की सम्बन्धमा दरार आउन समय लाग्दैन। आफ्नो सहपाटीको सानो कुरामा पनि रिसाउनु, बहाना बनाउने बानी हुनुले …
हिन्दु धर्म ग्रन्थका कथाहरूलाई राम्रोसँग बुझ्ने कोशिस गर्यो भने यी कथाहरू एकदमै रोचक छन्। देवता र राक्षस, राजा र रानीको कथा मात्रै होइन, कुनै कुनै पक्षहरू यस्ता रहस्यमय अनि अपूर्ण छन् कि त्यसको बारेमा घोरिएर सोच्न बाध्य भइन्छ। हामीले सुनेका थियौँ कि, आत्मा कहिल्यै मर्दैन अनि एउटा रूपबाट अर्को रूपमा …
मनले मागेको पुराउने श्री अमरनाथले हामी सबैको रक्षा गरून् !! एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।
February 9, 2019	Rashifal 0
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) –राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने भएकाले साँझपख उत्साह र उमङ्गमा बृद्धि हुने दिन छ । त्यसैले आज दिनभरि तपाईंले धनको कारोबारमा सतर्क रहनु बेस हुनेछ । नचाहेको क्षेत्रमा खर्चको मात्रा ह्वात्तै बढ्न सक्छ । जुवातास र सट्टाबाजीबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ । …
February 8, 2019	Healthy Life 0
तपाईलाई स्ट्रबेरी कतिको मन पर्छ ? मन पर्दैन भने पनि अब खाने प्रयास गर्नुस् । स्वास्थ्यका हिसाबले यसका फाइदाहरू निकै धेरै छन् । यसमा हुने तत्वहरुले शरिरमा हुने विभिन्न समस्यालाई समेत निराकरण गर्न मद्धत गर्छ । निकै स्वादिलो यो फल स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि निकै उत्कृष्ट फल हो । यसले मानिसमा …
फर्सी कत्तिकाे मन पर्छ ? मन नपरेपनि खाने गर्नुहाेस, फाइदा सुनेर अचम्ममा पर्नुहुनेछ तरकारीको रुपमा प्रयोग हुने विभिन्न तरकारीहरू मध्ये फर्सी पनि एक निकै उपयोगी तरकारी हो । फर्सी स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि निकै फाइदाजनक मानिन्छ। फर्सीमा भिटामिनको मात्रा निकै बढी पाइन्छ भने अन्य पौसष्टक पदार्थ पनि उत्तिकै पाइन्छ । यसमा …
मिर्गौला रोगबाट बच्ने ४ उपाय
मिर्गौला रोगको लक्षण देखिएपछि उपचार गर्छु भन्नु एकदमै खतरानाक हुन्छ । किनभने मिर्गौला रोगको लक्षण देखिनु भनेको मिर्गौला बिग्रिसकेको अवस्था हो । त्यसैले हरेक मानिसले वर्षमा एकपटक आफ्नो मिर्गौला परीक्षण गरेर बस्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । नेपाली समाजमा धेरैले रोगको लक्षण देखिएपछि वा बिरामी भएपछि मात्र उपचारमा ध्यान …
शुक्रबारको दिन यस्ता सामान किन्नुहोस भाग्य चम्किन्छ !
February 8, 2019	Dharma 0
शनिबारको दिन फलामको समान किन्नु हुदैन। किनकि यसले घरमा दरिद्रता पैदा हुन्छ। धनको हानी हुन्छ। आर्थिक समस्या पैदा गर्छ। कुनै समान या बस्तु किन्दा हामी कुनै कुराको ध्यान नदिई किन्ने बानीले घरको सुख शान्ति हटाईदिन्छ। यस्तै आज शुक्रबारको दिन कुन बस्तु किन्दा हाम्रो भाग्य चम्किन्छ र शुभ हुन्छ भन्ने बारे …